Wax-soosaarka Istaraatiijiyaddaadu Ma yahay Soo-saar Istaraatiijiyadeed, Joogitaan Mise Hay'ad? | Martech Zone
Mid ka mid ah isbarbardhiga aan inta badan dadka uga sheego hay'addeena waa inaynaan ahayn Suuqgeyn Jiffy Lube. Shaqadeenu ma ahan inaad si deg deg ah ku galno oo aan kugula soo galno, warqad yar oo warqad ah ku dhajino muraayaddaada oo aan ku arko bisha dambe. Waxaan nahay in badan oo ka mid ah shaqaalihii ceelka oo si waalli ah u diyaarinaya gaariga tartanka. Waxaa jira waxyaabo badan oo ah Jiffy Lubes halkaas - ma dooneyno inaan ka mid noqonno.
Soo saarista Macluumaadka
Maaddaama ay tixraaceyso waxa ku jira, wakaaladuhu waxay kuu hayaan khadka wax soo saarka. X tirada tirooyinka bishiiba, X lambarka waraaqaha caddaaladda ah, X tirada tifaftirannada oo ay ku kacayso qiimo dhan X dollars. Qandaraasku wuu bilaabmaa iyaguna way soo saaraan. Waxaa lagu siiyaa wax soo saarka iyo waqtigiisa mashruuca iyada oo aan fiiro gaar ah la siin in aad ku guuleysato tartanka iyo in kale.
Waxaan aragnaa shirkado badan oo isdiiwaangaliyay istiraatiijiyaddan maxaa yeelay - marka hore - waxaa jira tiro badan oo nuqullo qorayaal ah oo halkaas jooga oo doonaya shaqo joogto ah iyo - tan labaad - ma aysan awoodin inay soo saaraan waxyaabaha ku jira gudaha waxayna ogaanayaan inay luminayaan tartamayaashooda. Nasiib darrose, maadaama aysan dhag jalaq u siinaynin waxqabadka mawduuca, waxay sii wadaan inay lumiyaan.
Waa qaab fidsan oo aan dib ugu laabanayn maalgashiga. Waa xariiq isku imaatin leh alaab celcelis ah.
Istaraatiijiyadda labaad ee aan daawano hay’ado badan oo ay geynayaan ayaa ah saami qaybsiga or joogitaanka webka istaraatijiyad. Kani waxaa ka mid ah nuxur iyo dhiirrigelin, iyadoo sharciyadu yihiin inaad lahaan kartid wax badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha soo-galaya haddii aad wax badan qorto oo aad inbadan sii dhiirrigeliso. Ack… maxaa waqti lumis ah. Hubaal, kordhinta saamigaaga codka ayaa kuu horseedi doonta hogaamin badan. Ma ihi haba yaraatee wax wada qabsiga ah oo ah istiraatiijiyad wax soo saar ballaaran iyo dhiirrigelin, laakiin waxay lumineysaa fursad aad u ballaaran.
Waa dariiq toosan oo lala socdo soo laabasho toos ah oo maalgashi ah. Waa xariijin dhakhso leh isku celcelis shey.
Kawaran hadaad qori kari lahayd waxyaabo kooban oo macno badan lahaa, kor uqaadi lahaa, oo aad u kordhin lahayd dalabka si aad ah Taasi waa sababta aan u horumarinay kuweenna habka maamulka nuxurka la macaamiisha. Maaha xawaareynta qadka isku imaatinka iyo soo saarista isbeddelka saliidda. Waxay dhiseysaa gaariga tartanka ka dibna ku jiidaya godadka mar kasta oo aad lumiso hogaanka.
Waa hab iska caabin ah oo leh soo laabasho sii kordheysa ee maalgashiga. Waa qadka tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah loo iibinayo
Xalay waxaan ka qayb galay Shirka Xogta Daran halkan Indianapolis. Kaqeybgalka waxaa noo ahaa macmiil aan u shaqeynaynay sanado ilaa ay keeneen maareyn suuq cusub. Maamulaha suuq-geyntaas wuxuu lahaa asalka maaraynta dhacdooyinka wuxuuna eegay bogga intabadan ee buug-yaraha halkii uu ka noqon lahaa barxadda iibka ee soo gala Waxay jartay hawlgalkeenii shirkadduna markii dambe lumisay awooddeeda badan iyada oo loo marayo raadinta iyo arrimaha bulshada.
Iyada oo ay taasi jirto, iibiyaha ka socda shirkadda ayaa sheegay in shaki la'aan, taxane infographic in aan u horumarinay shirkadda sano ka hor 3 wali wuxuu ahaa isha ugu xoogan ee ay kuheli karaan hogaamin uqalma webka. Kaasi waa nooca barnaamijka aan halkan kaga hadlayno. Waxaad bixineysaa lacag badan maanta, laakiin waxaad helaysaa natiijooyin sifiican oo wanaagsan waqti kadib!
Tags: maamulka nuxurkajoogitaanka waxyaabahawax soo saarkaistiraatiijiyadda contenttaxane infographicjoogitaanka webka
Waxaan jeclaan lahaa in kuwa wax iibiya ay ka joogsadaan hadalkaan…
Buzzoole: Ku fuliso ololeyaal u ololeeyeyaal caan ah iyo saamayn
Goob aad u fiican Douglas, oo leh macluumaad badan oo faa'iido leh.
Waxaan hadda ku biiray joornaalkaaga toddobaadlaha ah.